50 Tilmaamood Oo La Isku Raacay In Ay Haweenku Ragga Ku Doortaan, Gabadh Kastaana Jeceshahay (Q:3aad) | Gaaloos.com
Home » galmada » 50 Tilmaamood Oo La Isku Raacay In Ay Haweenku Ragga Ku Doortaan, Gabadh Kastaana Jeceshahay (Q:3aad)
50 Tilmaamood Oo La Isku Raacay In Ay Haweenku Ragga Ku Doortaan, Gabadh Kastaana Jeceshahay (Q:3aad)
11. Dhoollacaddaynta Soo Jiidashada Leh: Dhoollacaddayntu waa aalad xooggan oo xab sixir ah loogu soo jiito dadka kula nool. Dhoollacadaynta soo jiidasahda leh ee ninku waxa ay gilgishaa qalbiyada haweenka waana arrin saamayn weyn leh. Guud ahaan qof kasta oo ku caan baxay dhoollacaddayntu waxa uu qalbiyada dadka uga dhaw yahay qof kasta oo kale. Haweenku waxa ay jecel yihiin ragga dhoollacaddeeya ee bashaashka ah waxaanay neceb yihiin ragga waji macbuuska ah ee xidhixdhan.
12. Ninka Shaqada Awoodda Saara: Raggu waxa ay isku dhaafaan hadba inta ay ka shaqaystaan ee ay awoodda si weyn u saaraan xoogsiga. Haweenku waxa ay jecel yihiin ragga awoodda saara shaqadooda ee ka soo dhalaala. Waxa ay neceb yihiin ragga shaqooyinkooda ku ciyaara ee aan ku wanaagsanayn in ay qabtaan shaqo tayo leh oo wakhti la galiyo. Waxa ay neceb yihiin ragga wahsiga badan.
13. Ragga Qalambaawiga Ah Ee Heesaha Ku Wanaagsan: Waligaa ma is waydiisay dareenka weyn ee dumarku u hayaan Fannaaniinta ama ragga ku wanaagsan ciyaaraha ha noqoto kuwa dhaqanka ama kuwan casriga ah ee wakhtigane. Ragga Heesaha iyo guud ahaan suugaanta ku waanaagsani waxa ay yihiin kuwo dega qalbiyada haweenka. Waana dareen ay ka siman yihiin haween-weynaha adduunku. Fanaaniintu waxa ay kaalinta koowaad kaga jiraan dookha haweenka.
14. Ragga Dhiibsan Ee Xarragada Badan: Xarragadu rag iyo dumarba waa astaan soo jiidasho waxaanu labbiska qurxuun iyo jidhka la carfiyey saamayn weyn ku leeyahay dareenka soo jiidasho ee lammaanayaasha. Haweenku waxa ay jecel yihiin ragga xarragada badan ee joogga qurxoon leh. Haweenku waxa ay qalbiga ka jecel yihiin ayay sidoo kalena ka jecel yihiin indhaha iyo dareenka. Ragga qaab-dhismeedka wanaagsan ee labbiska qurxuuni waxa ay saamayn weyn ku leeyihiin dareenka haweenka waanay uga dhaw yihiin kuwa labbiska xun ee aan daryeel fiican siin muuqaalkooda iyo jidhkooda.
15. Codka Deggan: Akhriste waxa laga yaabaa in aad is waydiiso muhiimadda ay leedahay in ninku yeesho cod deggan oo aan qofka dhibin, balse astaantani waxa ay ka mid tahay astaamo la ogaaday in ay haweenku jecel yihiin in ay raggooda ku arkaan. Raggu marka laga hadlayo dhinaca hadalka waxa ay u qaybsamaan laba qolo. Kuwo qaylo badan oo hadal dhadheer iyo kuwo codkoodu degan yahay oo ay dheguhu xammili karaan in ay dhagaystaan. Deganaanshaha codku waxa la ogaaday in uu saamayn ku leeyahay dabciga ninka.
Haweenaydu waxa ay jeceshahay ninka codkiisu ka hooseeyo keeda.
Title: 50 Tilmaamood Oo La Isku Raacay In Ay Haweenku Ragga Ku Doortaan, Gabadh Kastaana Jeceshahay (Q:3aad)